Goynta Laser ee Kevlar iyo Aramid
Xalka Goynta Laser ee Kevlar (Aramid)
Goldenlaser wuxuu bixiyaa mashiinno goynta laser si loo fududeeyo habka goynta ee alaabada ku saleysan Kevlar iyo Aramid ee habka wax soo saarka, si wax ku ool ah u kordhisa wax soo saarka iyo tayada goynta.
Hawlgalka Laser -ku -habboon ee Kevlar (Aramid) - Goynta Laser
Kevlar iyo aramid way adag tahay in la gooyo iyadoo la adeegsanayo hababka makiinadaha caadiga ah sababtoo ah sifooyinkooda kuleylka iyo farsamada. Goynta Kevlar iyo aramid hababka caadiga ah waxay keenaysaa tayada wax-soo-saarka dhammaadka liita iyo baahida tamarta gaarka ah ee xad-dhaafka ah ee mashiinnada. Si kastaba ha noqotee, mashiinka laser -ku wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u badan hababka caadiga ah sababtuna tahay saxnaanta iyo socodsiinta degdegga ah.
Sida qalab goynta casriga ah, mashiinka goynta leysarka wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka badeecad dhammaad leh oo tayo sare leh, saxnaanta hawlgalka iyo dabacsanaan heer sare ah, taasoo dhalisay in si wanaagsan loo aqbalo qaybaha dharka iyo warshadaha. Goynta dhex Kevler la CO 2magaabay wiil laser waa mid aad u sooc. Goynta laser -ku waa mid aan xiriir lahayn oo, si ka duwan mindiyo ama garbaha, dogobka laser -ku had iyo jeer waa fiiqan yahay oo ma caajiso, sidaas darteed wuxuu hubinayaa tayada goynta joogtada ah. Kulaylka ka dhasha leysarka inta lagu gudajiro jarista Kevlar wuxuu xiraa geesaha wuxuuna baabi'iyaa jahawareerka.
Faa'iidooyinka Laser goynta Kevlar (Aramid)
Goynta laser-ka aan-xiriirka ahayn, ma laha isbeddel ama waxyeellada maaddada
Cidhifyo go'an oo nadiif ah oo nadiif ah, looma baahna daaweyn kadib
Awood u leh jarista qaababka adag iyo kakan ee cabbir kasta
Goyn tayo sare leh - dulqaad aad u fiican oo leh aag yar oo kulaylku saameeyey
Goyn degdeg ah oo lagu celcelin karo si loo caddeeyo sida saxda ah ee sawir kasta
Looma baahna qalab kasta oo si gaar ah loogu talagalay
Wasakhaynta maaddooyinka oo yaraata, waxyeellada jirka iyo qashinka
Aramid, macluumaadka maaddada Kevlar iyo tiknoolajiyadda goynta laser -ka ee la xidhiidha
Aramid , oo u gaaban "polyamide aromatic", waa fiber farsameysan oo aad u sarreeya oo nin sameeyay. Aramid waxay leedahay dhowr farsamooyin farsamo oo faa iido leh taas oo ka dhigaysa wax muhiim u ah dhinacyo badan oo kala duwan. Badanaa waxaa loo isticmaalaa xoojinta fiber -ka ee isku dhafka matrix -ka polymer. Kevlar waa nooc ka mid ah fiber aramid. Waxaa lagu duudduubay alaabta dharka ah waana mid aad u xoog badan oo khafiif ah, oo iska caabin u leh daxalka iyo kulaylka. Waxaa loo adeegsadaa codsiyada ballaaran sida injineernimada hawada (sida jirka diyaaradda), hubka jirka, jaakadaha aan xabbadu karin, bareega baabuurka, iyo doonyaha. Badanaa waxaa laga sameeyaa isku -darka. Kevlar ayaa sidoo kale lagu dari karaa fiilooyin kale si loo soo saaro isku -darka isku -dhafan.
Sababtoo ah xooggooda sare iyo adaygooda iyo sidoo kale fiilooyinku waxay u muuqdaan inay fuzz yihiin, aramid iyo Kevlar way adag tahay in la qodo oo la gooyo, oo u baahan qalab gaar ah si loo gooyo maaddada. Jarida laser-ka waa hab wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay isku -darka badan. Mashiinka goynta laser-ku wuxuu awood u leeyahay inuu jaro qaabab kala duwan oo ah walxo isku dhafan, oo ay ku jiraan aramid iyo Kevlar, taasoo suurtogal ka dhigaysa in la bixiyo xalal dhaqaale oo si dhaqso leh loogu wareejiyo badeecooyin tayo sare leh.
Codsiyada caadiga ah ee Aramid iyo Kevlar laser-goynta
Jaakadaha aan xabbadu karin, hubka jirka iyo dharka u adkaysta
Dharka difaaca, tusaale koofiyadaha, gacmo -gashiga, dharka mootada iyo dharka tartanka
Gawaarida iyo warshadaha hawada
Qaybaha warshadaha, tusaale
Erayada la xiriira Kevlar
Waxaa lagu taliyay mashiinka laser CO2 ee goynta dharka Kevlar®
Akhri wax badan oo ku saabsan badeecadan
Miyaad jeceshahay inaad hesho ikhtiyaarro badan iyo helitaanka nidaamyada leysarka iyo xalka hababka ganacsigaaga? Fadlan buuxi foomka hoose. Khabiiradayada ayaa had iyo jeer ku faraxsan inay ku caawiyaan oo si degdeg ah kuugu soo laaban doona.